Studiemotiverande kurs på folkhögskola waxay kaa dhigi kartaa in aad niyad u yeelatid in aad billawdid waxbarasho, ama aad dib u billawdid tii aad horay u joojisay. Koorsadu waxay tusaale ahaan ka koobantahay tababar xagga farsamada wax dhigashada ah, waxayna diiradda saareysaa maaddooyinka nuxurka ah ee cilmiga bulshada, ingiriiska, swiidhishka iyo xisaabta. Hadafku waa in la helo isku kalsooni iyo niyad, iyo in la abuuro qorshe mustaqbalka ah.
Qaabka koorsadu wey kala duwanyahay iyadoo hadba ku xiran astaanta iskoolka iyo baahida iyo waxyaabaha ay ka qeyb galayaashu doonayaan. Waxbarashadu waxay ka duuleysaa habka waxbaridda ee dugsiga shacbiga ee dadka waaweyn. Ka qeyb qaadasho firfircoon, wadahadal iyo koox wax ku barasho ayaa aasaasi u ah ka qeyb qaadashada wax dhigashada.
Koorsada ka dib laga yaabee in aad dooratid in aad waxbarasho ka sii wadatid waxbarashada dadka waaweyn ama koorso guud oo ah iskoolka shacbiga ee dadka waaweyn ee u dhigma heerka waxbarashada dugsiga hoose-dhexe ama dugsi sare.
Waxbarashadu waxay ka jirtaa dugsiyada shacbiga ee dadka waaweyn waddanka oo dhan. Waxbarashadu waa waqti buuxa muddo 3 bilood ah.
Waa in aadan lahayn shahaaddo dugsi sare ama waxyaabaha aasaasiga ah ee jaamacadaha lagu galo.
Waa annaga cidda si wadajir ah kuula qiimeyneyna in koorsada niyad u yeelidda xagga waxbarashadu ay kugu habboontahay.
Waxaan kaa caawin karnaa in aad heshid dugsi shacbi ah oo dadka waaweyn iyo fursad waxbarasho oo kugu habboon.
Dugsiga shacbiga ee dadka waaweyn wuxuu kuu soo saarayaa qorshe waxbarasho oo adiga laguugu tala galay.
Marka aad waxbarashada dhameysatid waxaa si ahaan lagu siinayaa shahaaddo koorsada ku aaddan, si ahaanna qorshe ku aaddan sida aad tallaabta xigta ee waxbarashada ama shaqada u qaadeysid.
Inta aad dhiganeysid waxbarashada koorsada niyad waxbarasho qof u yeelidda waxaad heli kartaa taageero dhaqaale. Waxaad heli kartaa lacag kaalmo ah oo aktivitetsstöd, utvecklingsersättning ama etableringsersättning.
Waxaad ku jirtaa ceymiska dhaawaca qofka iyo kooxda marka aad dugsiga shacbiga ee dadka waaweyn uga qeyb qaadaneysid koorsada niyadda waxbarasho qofka u yeesha.